Tanànan'i Gedi, rava an'i Gedi - Malindi
Adiresy: Gede Watamu Rd, Gede, Kenya
Fotoana misokatra: 7.00 - 18.00
Saran'ny fitsidihana: olon-dehibe - 500 KES, ankizy - 250 KES
Miorina amin'ny angon-drakitra voaray nandritra ny fikarohana ambanin'ny tany, dia i Gedi no iray amin'ireo tanàna tranainy indrindra any Kenya , ary azo inoana fa tamin'ny taonjato faha-13 taorian'i JK ary mbola nisy talohan'ny taonjato faha-17. Indrisy fa nandiso fanantenana ny tanàna nefa tsy namela porofo manamarina ny fiainany, fa ny fikarohana natao tao amin'ny faritanin'i Gedi nanomboka tamin'ny 1948 ka hatramin'ny 1958 dia manamafy fa tsy ny tanàna ihany no tanàna, fa ny toeran'ny varotra ihany koa. Ao amin'ny tsena sy tsena dia afaka mividy lamba lafo vidy, fitaovam-piadiana samihafa, firavaka, zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsara homarihina fa tsy natao tany amin'ireo tanàna manodidina ihany ny varotra, fa koa tamin'ireo firenena lehibe toa an'i Shina, India, Espana, sns.
Tanàna omaly sy anio
Ny fikarohana dia nanaporofo fa nisy moske tsara tarehy teo amin'ny tanin'ny tanàna fahiny, trano tsara tarehy iray, ary ny lalan'i Gedi dia natsangana tamin'ny trano vato kely misy efitra fandroana sy kabine. Nipongatra teny an-dalambe ny làlana an-dalambe ary nokarakarain'izy ireo tamin'ny fantsom-drano. Vondron'orinasa nohatsaraina na aiza na aiza, manome ny mponina ao an-tanàna amin'ny rano fisotro.
Ankehitriny, ireo mpizahatany dia afaka mahita ny sisa tavela eo amin'ny vavahadin'ny tanàna afovoany, ny lapam-panjakana voavono ary ny fototry ny Moske Gedi. Ireo vato rehetra ireo dia natao tamin'ny vatohara ho an'ny vatoharan-dranomasina.
Ny sisa tavela tamin'ny tanànan'i Gedi fahiny dia any Kenya , 16 kilometatra miala ny tanànan'i Malindi . Ny hahatongavana any amin'izy ireo dia mora kokoa amin'ny fiara, mifindra eny amin'ny fiaramanidina B 8, izay hitarika mankany amin'ilay toerana voatondro. Afaka maka taxi koa ianao.
Afaka mitsidika ny mari-pahaizana isan'andro ianao isaky ny 07:00 hatramin'ny 18:00. Ny fidirana fidirana dia. Ny vidin'ny tapakila ho an'ny olon-dehibe dia 500 KES, ho an'ny zaza latsaky ny 16 taona, 250 KES. Vondron'olona mitaingina olona 10 no mandoa 2000 KES.
Tendrombohitra Drakensberg (Lesotho)
Tanàna ety an-tanànan'i Geldi
The Cathedral (Casablanca)
Ny Museum Art Pretoria
Asher sy ny vadiny mivarotra ny tranony any Hollywood
Famoronan-jaza ho an'ny ankizy avy amin'ny plastikaine
Lakozia ao amin'ny tranon'ny firenena iray
Fiaramanidina ho an'ny ankizy
Inona avy ireo vitamina ao anaty tongolobe?
Ny fitsipiky ny golf
Famantarana ny mpamosavy
Rano mafana amin'ny kitay
Fashionable outerwear - ririnina 2015-2016
Ahoana no hikarakarana trondro ao amin'ny akvarium?
Firy taona ny ankizy no afaka miasa?
Ny fijerin'ny fianakaviana